Izifundo zasimahla ze-Coursera ezingama-37 ezinesiQhagamshelo sokuSebenza kwazo
Pholisha izakhono zakho ezikhoyo kunye nolwazi kwaye ufumane ezintsha ngokufaka isicelo esinye okanye nangaphezulu kwezi-35 zeekhosi zasimahla ezidweliswe kweli nqaku.
Iqonga lokuFunda leKhosi kwiKhosi
Izifundo zasimahla ezingama-37 zekhosi
Intshayelelo yokutya kunye nempilo
Ulawulo lweeNkampani zeFashoni kunye neLorhwebo
UbuGcisa bemihla kunye neeMbono
IsiCwangciso seNtengiso yesiqulatho
Uyilo kunye nokuchazwa kwezilingo zeCliniki
Ubunjineli bezeMali noLawulo loMngcipheko
Ukulawula iNkampani yeXesha elizayo
IsiNgesi kuKhuliso loMsebenzi
Ubunkokeli bamanye amazwe kunye nokuziphatha kombutho
Ukunyangwa kwengqondo okuqinisekileyo kunye neMpilo yeNgqondo
Ukuqonda iindlela zoPhando
Intshayelelo yoLwazi lobuNtu
Izinto ezisisiseko zenkqubo
Ukwaziswa kokuCwangciswa kunye neMATLAB
Ulawulo lweDatha kuPhando lweKlinikhi
Isingeniso kwiNzululwazi yezoBungqina
I-Python kunye ne-Statistics yoHlahlelo lweMali
Izakhono zeNzululwazi yeMathematics
Isixhobo sezixhobo zomfundi
Izinto eziManyeneyo zezeMali eziManyanisiweyo
Ubugcisa kunye nemibono: Ukufundisa ngemixholo
Intshayelelo kwi-Genetics kunye ne-Evolution
Intshayelelo kuMthetho weNdalo kunye noMgaqo-nkqubo
I-Biology idibana neNkqubo
Intshayelelo yoPhawu lwaBantu
Intshayelelo kubuchwephesha bobuNjineli
I-Coursera liqonga lokufunda online elasekwa ngonyaka ka-2004 ngoonjingalwazi baseStanford uAndrew Ng noDaphne Koller, besebenza namanye amaziko kunye nemibutho ukubonelela ngezifundo ezivulekileyo kwi-Intanethi, izidanga kunye nobungcali kwizifundo ezahlukeneyo.
I-Coursera yinto entsha ebalulekileyo kwimfundo, idibanisa zonke iikhosi kunye noonjingalwazi abaphezulu abavela kumaziko aphuma kwihlabathi liphela, kubandakanya iYale neHarvard, kwiqonga elinye lokwenza imfundo ibe lula kwaye ifikeleleke kubo bonke abantu kwihlabathi liphela.
Ngaphandle kokonwabela into entsha eyenziwe yi-intanethi, abathathi-nxaxheba nakweyiphi na indawo yehlabathi banokufunda ikhosi abayithandayo nakweliphi na ilizwe okanye iziko, ngaloo ndlela babasindise uxinzelelo kunye neendleko zokuhambahamba befunda. Endaweni yoqhagamshelo oluzinzileyo lwe-intanethi, iPC kunye nokuzimisela kwakho ungafumana isidanga, kwaye ufumane nasiphi na isakhono osikhethileyo kwintuthuzelo yekhaya lakho.
Iqonga le-Coursera linezinto ezininzi ezinomdla zokwazi malunga nokuzixoxa apha azinakuphela kodwa inye into enomdla andinakuyishiya le yile; ukuba uthatha isigqibo sokulandela isidanga esivela kwiYunivesithi yaseHarvard ngokusebenzisa iqonga le-Coursera, uya kufumana idigri yakho ngokukhawuleza kwaye ufumane ukwamkelwa okufanayo okuboniswe kumfundi ukuze afumane isidanga esifanayo kwisikolo esiqhelekileyo.
Oku kusebenza ngokulinganayo kuzo zonke ezinye izifundo ozifundayo kunye nenqanaba olifumanayo ekufundeni kwi-Intanethi ngeqonga le-Coursera, ewe ewe, kuyabiza kakhulu xa kuthelekiswa nesikolo esiqhelekileyo kwaye zonke ezi zinto ziyonwabele ukonwaba kwekhaya lakho konke kubulelwe kwi-intanethi .
Ke ngokobuchwephesha, unokuba seBrazil kwaye ufunde ngenkqubo yesidanga kwiYunivesithi yaseYale ngokusebenzisa i-Coursera, ubhatale imali encinci kunqanaba kwaye ufumane ukuqondwa ngokulinganayo phakathi kwabasebenzi. Oku kunomdla njengoko imfundo inokufumana.
Iqonga le-Coursera libonelela ngezifundo ezivela kwiiyunivesithi ezidumileyo kwihlabathi kwaye ndiwenzile la manqaku alandelayo;
I-17 iYunivesithi yasePrinceton yasimahla iikhosi ezikwi-Intanethi
Iikhosi ezingama-50 zasimahla zeHarvard ezikwi-intanethi zabafundi
Iikhosi ezingama-37 zasimahla ze-Ivy League ezikwi-Intanethi ezinekhonkco lesicelo ngqo
Iikhosi ze-15 zasimahla zeYale online kunye nezatifikethi
Enye into enomdla malunga neKhosiera zizifundo ezizisa etafileni, iikhosi zinobuchule, izakhono kunye nolwazi olufumanayo yimibutho yanamhlanje efuna kubasebenzi ukuze nabo baqhubele phambili kuba utshintsho kufuneka luhlale lusenzeka.
I-Coursera ibonelela ngezifundo zasimahla ezifundiswa ngokulinganayo ngabahlohli abaphezulu kwiiyunivesithi kunye neenkampani ezikuvumela ukuba ufunde izakhono ezintsha kunye nolwazi, okanye upolishe ezindala nanini na, naphi na, nangaliphi na ixesha kwaye akukho luhlu lweminyaka lokuthabatha inxaxheba kwezi zifundo.
Ungathatha inxaxheba kwikhosi enye okanye nangaphezulu yeekhosi zasimahla, akukho lwazi luchithwe nabani na angaba luncedo xa ungalindelanga. Ndenze uphando kuzo zonke iikhosi kwaye ndakhetha ezingama-35 zazo ezinamanqanaba aphezulu kunye nokuphononongwa okuhle ngabantu ababekhe bazithatha.
Ukuphononongwa kwezi zifundo zingama-37 zeekhosi zasimahla endiza kuzidwelisa kungekudala ziye zanceda abantu abaninzi, kuba ezinye zibanike inkuthazo emsebenzini, zanceda abanye ukuba baqalise ishishini lokuqalisa ngempumelelo kwaye abanye bonwabile bagxininise ukuba kubancede kangakanani ekufuneni ingqesho njengoko babephambi kwabo bakhuphisana nabo ngenxa yezakhono zabo ezisandula ukufundwa.
Ngaphandle kokuqhubela phambili, nantsi iikhosi ezingama-37 zasimahla onokukhetha kuzo
Apha ngezantsi kukho iikhosi zasimahla ze-Coursera onokukhetha kuzo ukufumana naziphi na izakhono kunye nolwazi olukhethileyo ngaphandle kokuhlawula idime:
Isixhobo sezixhobo zomfundi wezomthetho
Intshayelelo kwiMathematika yobunjineli
Le khosi ibonelelwa nguStanford kwaye ifundiswe ngomnye woonjingalwazi bayo be-AI, konke malunga nokwenza ukuba iikhompyuter zisebenze ngaphandle kokucwangciswa. Ngokufaka isicelo sale khosi yasimahla, uya kufumana izakhono kunye nolwazi kubuchule bokufunda ngomatshini kwaye ube nakho ukwenza ukuba iikhompyuter zikusebenzele okanye umbutho wakho.
Iiyure ezili-54 zokugqiba
Inikezelwa nguYale, le khosi iphonononga izimvo, iindlela kunye namaziko avumela uluntu lwethu ukuba lulawule umngcipheko kwishishini lokukhuthaza. Ukuthatha le khosi kuya kukuxhobisa ngolawulo lomngcipheko kunye nezakhono zobunkokeli kwaye uqonde imigaqo yezemali.
Ukugqiba iiyure ezingama-27.
Le yenye ikhosi yeYale, apho usebenzisa isayensi ukufunda indlela yokuziphatha yabantu abakungqongileyo ngaloo ndlela ufumana izakhono zokubafunda ngokulula abantu kwaye usebenze nabo.
Ukugqiba iiyure ezingama-15.
Ukufaka isicelo sale khosi yasimahla kuya kukwenza ube yinto enexabiso kakhulu, kuwe nakwintlangano yakho. Le khosi iya kukuxhobisa kwaye ikufundise ngeendlela ezifanelekileyo zokwenza izivumelwano kunye nothethathethwano kumashishini nakwezinye iinkalo zobomi. Ukufumana izakhono zothethathethwano oluphezulu kunye noNjingalwazi uGeorge Siedel weYunivesithi yaseMichigan kwaye uyigqibe kwiiyure ze-16.
Ukugqiba iiyure ezingama-16.
Ukutya okusempilweni ngokulinganayo impilo esempilweni, kokubini ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo emzimbeni, zijoyine le khosi namhlanje kwaye ufunde le ndlela yokuphila yokutya isempilweni njengokutya okufanelekileyo kokutya, ukuba ungakutya nini kwaye ngubani onokukutya. Ulwazi olufunyenweyo lunokukwenza ube ngumqeqeshi womzimba kunye nabantu bokucebisa ngempilo nakwindlela yabo yokutya.
Ukugqiba iiyure ezingama-5.
Ukuba uhlala unomdla malunga nefashoni kunye nomzi-mveliso wokunethezeka, nali ithuba lakho lokufunda ukuba lisebenza njani, iingcali ziya kukukhokela kwindlela yokuqonda iimveliso zabo, iimveliso, ukuthengisa kunye neendlela zonxibelelwano. Ngolu lwazi, nawe unokwenza uphawu okanye ishishini lefashoni okanye usebenze phantsi kwelinye kwindawo ephezulu.
Ukugqiba iiyure ezingama-11.
Uhlala unomdla malunga nobugcisa okanye ufuna ukukhulisa ulwazi lwakho emva koko le khosi yeyakho, uya kufunda ngakumbi malunga nobugcisa banamhlanje kunye nexesha langoku kwaye ufumane izimvo ezizodwa kunye namava ngendlela yokwenza ubugcisa bakho bube ngcono.
Ukugqiba iiyure ezingama-13.
Le khosi iya kukufundisa ukuba uyiphuhlise njani, uyicwangcise kwaye uyiphumeze ngeendlela zokuthengisa ezinokukwakha ngokufanelekileyo kwaye zinokusebenza ngokulinganayo kwishishini lakho ukuvelisa iziphumo ezifanelekileyo kwaye liqhubele phambili.
Ukugqiba iiyure ezingama-20.
Uvavanyo lwezonyango luvavanyo olunokuba ngohlobo lwamachiza amatsha, iinkqubo zotyando, iinkqubo zempilo okanye izixhobo zokunyanga izifo ebantwini kunye nokwenza ubomi bube ngcono. Le khosi ifundisa imigaqo esisiseko yoyilo lweemvavanyo zeklinikhi, uya kufunda imigaqo kunye noomatshini abasetyenziswa kuvavanyo lweklinikhi.
Ukugqiba iiyure ezingama-10.
Le yikhosi eyahlukeneyo enikezelwa kwi-Intanethi yiYunivesithi yaseColumbia, ukudibanisa ezemali nezoqoqosho, imathematics, manani, ubunjineli kunye nekhompyuter. Ukugqibezela le khosi kubonelela ngolwazi olunzulu kuzo zombini ithiyori kunye nezinto ezenziwayo zezemali.
Ifundiswe kwi-Intanethi ngomnye uprofesa weSikolo soShishino saseLondon, le khosi ibonelela abafundi ngolwazi ngendlela yokulawula ngokufanelekileyo inkampani yanamhlanje kunye nokubaxhobisa ngemibono yethiyori kunye neyenzekayo kwimeko yokulawula ezo nkampani.
Ezemidlalo lushishino olunezigidigidi zeedola nakwimfuno engapheliyo yeentlobo ezahlukeneyo zabantu kubandakanya abathengisi. Thatha le khosi kwaye ufunde ukuba kuthatha ntoni ukuba ngumthengisi wezemidlalo onobuchule phakathi kwezinye izinto oza kufunda kuzo, indlela yokukhuthaza kunye nokuthengisa umcimbi wezemidlalo, indlela yokuphuhlisa inkxaso-mali kunye nendlela yokusebenzisa amaqonga eendaba ezentlalo ukukhulisa abalandeli bakho , usebenzisa indlela efanayo ukuthengisa imicimbi ekhethekileyo ngokubhekisele kwiqela lakho.
Le khosi yeyababethetha isiNgesi kunye nabangengawo amaNgesi, iya kunceda ukuphucula unxibelelwano kunye nezakhono zolwimi kunye namandla esigama ukuze ufezekise iinjongo zakho zobungcali, uya kuzithemba xa uthetha esidlangalaleni usenokuba ujongana nabaphulaphuli okanye xa usenza udliwanondlebe.
Iiyure ezili-40 zokugqiba
I-Neuroscience sisifundo senzululwazi senkqubo ye-nervous system ngokubhekisele ekuqondeni indlela abaziphethe ngayo, ngale khosi uya kufunda kwaye wazi malunga neenkqubo ze-neural ezinoxanduva lokuziva, isenzo kunye nokwamkelwa nokwazi malunga nezifo ezinxulumene noko okanye ukungasebenzi.
Iiyure ezili-62 zokugqiba
Ukuthatha indima yobunkokeli kumbutho kuthetha ukuba kuya kufuneka ujikeleze ukwenza amashishini, ukuthatha le khosi lithuba elihle lokuba uphuhlise ubunkokeli obunobuchule kunye nezakhono zonxibelelwano kwaye ufunde indlela imibutho eziphatha ngayo ithiyori kunye nokusebenza. Oku kuyakwandisa ukusebenza kwakho kobunkokeli kwaye usebenze ngokufanelekileyo kwimida kunye neenkcubeko ezahlukeneyo.
Iiyure ezili-15 zokugqiba
Eli licandelo lokuqala kwikhosi eya kuthi incede ekuphuhliseni ubuchule bakho bokuhlalutya kunye nokucinga okunzulu kunye nokufunda iithiyori ezininzi zokuziphatha kombutho kunye nendlela yokusebenzisa ezi zimvo xa usenza umbutho ukuzisa utshintsho olusebenzayo.
Iiyure ezili-27 zokugqiba
Zibandakanye kwisifundo sonyango lwengqondo olunikezelwa yiDyunivesithi yaseSydney, funda indlela yokuchonga abantu abanempilo yengqondo kunye nemiba yoxinzelelo kwaye ube nakho ukuphucula impilo yabo yengqondo kunye nokuphila kakuhle ngokukhuthaza, inkxaso kunye nonyango.
Ukugqiba iiyure ezingama-23.
Isizathu sophando kukujonga umxholo kwaye ufumane iimpendulo, ukuthatha le khosi kuya kukunika ukuqonda okunzulu kwaye kukubonelele ngezakhono kwiindlela ezahlukeneyo zophando kunye neendlela onokuzisebenzisa kwizifundo zakho okanye kubomi bakho bobungcali.
Eli licandelo lokuqala le-physiology elifundisa abafundi ukuba baqaphele kwaye basebenzise iikhonsepthi ezisisiseko ezilawula ukusebenza komzimba ngokudibeneyo kwiinkqubo zomzimba ezilithoba. Uya kulazi igama lesigama somzimba kunye nokufumana izakhono kwiindlela ze-metabolic, i-biology, iinkqubo zamalungu kunye neyeza.
Ukugqiba iiyure ezingama-31.
Ikhompyuter ayonwabisi ngaphandle kwenkqubo, thatha inyathelo lokuqala kwinkqubo ngokujoyina le khosi yasimahla kwaye ufunde iziseko zokwakha iibhloko zenkqubo kunye nokubhala ulwimi olusebenzayo lwenkqubo usebenzisa iPython.
Ukugqiba iiyure ezingama-25.
I-Cryptography yinkqubo yesoftware eyilelwe ukukhusela ulwazi kwiinkqubo zekhompyuter, yindlela yokhuselo efana nokubethela. Ngale khosi ekwi-Intanethi, uya kufunda kwaye uxhotyiswe ngezakhono zokubhala kwaye ukwazi ukuzisebenzisa kwihlabathi lokwenyani ukusombulula iingxaki.
Ulawulo ngumsebenzi onzima ofuna umsebenzi onzima kwaye unempawu ezifanelekileyo zokuphumelela, le khosi ikuxhobisa ngezakhono zolawulo olufanelekileyo njengokukhetha umntu olungele umsebenzi, unike inkuthazo kunye nenkuthazo kwiqela lakho, ukusombulula ngokulula ukungavisisani indawo yokusebenzela, njl.njl apho unokufaka isicelo kulo naluphi na uhlobo lweshishini apho ubambe isikhundla kwaye ufumane iziphumo ezilungileyo.
Le yinkqubo yenqanaba labaqalayo, apho ufunda khona ukuba ungayisebenzisa kanjani inkqubo yolwimi yeMATLAB ukubhala iinkqubo ezilinganayo kunye nokusombulula iingxaki zehlabathi lokwenyani. IMATLAB isetyenziswa ngabaqalayo kuba kulula ukuyifunda, ibhetyebhetye kwaye iluncedo kakhulu ekuboniseni iikhonsepthi ngokubanzi kwisayensi nakwinkqubo
Ukugqiba iiyure ezingama-35.
Abantu aboyilayo nabanobuchule balawula umhlaba kwaye nawe unokuba yinxalenye yabo, thatha le khosi ukwakha kunye nokuphuhlisa amandla akho okuyila kunye nokuyila, funda ubuchule obufunekayo, isimilo kunye nezixhobo eziza kongeza ubuchule bakho bokuzalwa kwaye zikuqhubele empumelelweni.
Ukugqiba iiyure ezingama-22.
Ulawulo lwedatha lubalulekile kuyo yonke imibutho kule meko, uya kufunda ngeendlela ezisebenzayo kunye neengcinga eziqinisekileyo zokuxhasa ukucwangciswa, ukuqokelelwa, ukugcinwa kunye nokusasazwa kwedatha kuphando lwezonyango. Uya kufumana izakhono kulawulo lwedatha ngokubanzi, ukuqokelelwa kwedatha kunye nohlalutyo kunye nolawulo lwedatha yeklinikhi.
Ukugqiba iiyure ezingama-18.
intshayelelo kwiNzululwazi ye-Forensic
Ngaba uluhlobo olunobuchule bophando? Eli ke lithuba elihle lokuqalisa uhambo lwakho kwisayensi yophando, uya kufunda imigaqo-nkqubo yesayensi kwaye ufumane izakhono kunye nobuchule bezenzululwazi zenkundla eziza kuboniswa ithiyori kunye nokusebenza.
Yandisa ubuchule bakho bokwenza iPython ngale khosi, funda ikhowudi yePython kunye neenkcukacha kunye nendlela yokuzisebenzisa ekuhlalutyeni idatha yezemali. Uya kufumana izakhono kuhlalutyo lwezezimali kunye neenkcukacha-manani, inkqubo enamandla yePython, ukubonwa kwedatha kunye nokunye okuninzi.
Le yikhosi yenqanaba labaqalayo enikezelwa yiDuke University kwaye yeyabantu abafuna ukuphucula izakhono zabo zezibalo kwisayensi yedatha.
Inikezelwa yiYunivesithi yaseYale, le khosi ikwi-Intanethi ilungiselela abafundi bonyaka wokuqala wezomthetho kuhambo lwabo kwilizwe lokudibana, uya kufunda isigama, iikhonsepthi kunye nezixhobo ezisetyenziswa ngabantu kwinkampani yokudibanisa ngokwakha isiseko osifunayo ukuze uphumelele kwisikolo somthetho kwaye ngaphaya.
Ukugqiba iiyure ezingama-21.
Ngale khosi, uya kufumana ukuqonda okungcono kwemicimbi yezemali enxulumene neenkampani, abatyali mali kunye nokunxibelelana phakathi kwabo kwiimarike ezinkulu. Uya kufumana izakhono kwezemali ezihlanganisiweyo, umngcipheko wezezimali, ukuvavanya phakathi kwabanye.
Le khosi iphonononga imixholo emine esetyenziswa ngootitshala ekufundiseni kwabo; (i) Iindawo kunye neZithuba (ii) Ubugcisa kunye neZazisi (iii) Ukuguqula iiNjongo zeMihla ngemihla (iv) Ubugcisa noMbutho kwaye baqeshwe ekufundiseni ukunceda ukwakha izakhono zakho ezibalulekileyo ezixhasa iindlela zokufundisa ezisekwe kwimixholo kunye nokwakha ukuzithemba ngokunjalo.
Ukugqiba iiyure ezingama-8.
Kule khosi, uya kufunda imigaqo esisiseko kwaye uqhelane neengcinga kunye namagama asetyenziswa kule ndawo yebhayoloji ekulungiselela ngcono inqanaba eliphambili.
Le khosi ibonelela ngolwazi ngemithetho ekhokela okusingqongileyo, ngokuthatha le khosi, kufuneka uhlolisise kwaye uphonononge le mithetho, ufunde imiba yokungayilandeli kunye nendlela yokusombulula.
Ukugqiba iiyure ezingama-14.
Inkqubo inokusetyenziswa kumacandelo ahlukeneyo kubandakanya inzululwazi yebhayoloji, le khosi ifundisa indlela yokusebenzisa inkqubo yobuchule yePython ukusombulula iingxaki ezinxulumene nebhayoloji, ngaloo ndlela ufumane izakhono kwi-bioinformatics, algorithms kunye nePython programming.
Ukugqiba iiyure ezingama-19.
Funda iziseko zophawu lomntu, zixhobise ngezakhono zokwenza uphawu lomntu, ulondoloze kwaye uhlale kulo. Uya kufunda kwakhona ukuba uluseta ngokufanelekileyo njani uphawu lwakho kwaye ulusekele ubuncinci kumaqonga amajelo amathathu eendaba.
Ukugqiba iiyure ezingama-6.
Ulwazi yimpahla enexabiso eliphezulu kwihlabathi langoku kwaye ezinye iinkampani ezinkulu zobuchwephesha zithande ukweba ulwazi kwezinye iinkampani ngaphandle kwamanyathelo afanelekileyo okhuseleko. Le khosi iya kukuxhobisa ngezakhono kunye neendlela zokuphucula isoftware enokukhusela ulwazi olufana nokubhala kunye nokubethela.
Le khosi ifundisa kwaye ixhobise abafundi abanomdla ngemigaqo yoomatshini bobunjineli kunye nendlela yokusebenzisa le migaqo ekujonganeni neengxaki zobunjineli bokwenyani.
Apho unoluhlu lweekhosi ezingama-37 zasimahla kunye nezixhumanisi zazo zesicelo, ezenza ukuba ucofe kude ufumane isakhono osithandayo.
Sikubudala obutsha kwaye iindlela ezindala ezindala ziya kufa okanye zisebenze kancinci, abasunguli beqonga lokufunda elikwi-Coursera bayakuqonda oku, baqonde ukuba ilizwe lihamba ngokukhawuleza lingena kwaye lisaphonononga iminyaka yedijithali ke ukuyilwa kwedijithali ukutsha njengeqonga lokufunda leC Coursera, apho unokufumana khona izandla zakho kwizakhono ezitsha eziza kwenza ukuba ube yimpahla exabisekileyo kwihlabathi ledijithali.
Ezi zifundo ndizidwelise apha ngasentla ziyinxalenye enkulu yezi nkampani kunye nemibutho emitsha, ukufumana izandla zakho kuzo kuyakwenza ukuba ube yinto ebaluleke kakhulu kuwe nakwinkampani yakho kuba zizakhono zolu hlobo ezifunwa yimibutho yale mihla, ke fumana enye okanye ezingaphezulu namhlanje.
E-Coursera, ungaya kuzo naziphi na izifundo eziqhelekileyo, ugxile kwisakhono, ufunde ikhosi apho ufumana isatifikethi sobungcali okanye isidanga senkosi kwaye ufumane isatifikethi.
ISikolo seShishini saseHarvard kwi-Intanethi | Imali, Ukwamkelwa, iScholarship
Iinkqubo ezili-10 eziphezulu zeSatifikethi se-Oceanography kwi-Intanethi
Iikhosi eziphezulu ze-17 zasimahla ezikwi-Intanethi zoBuhle ezineZatifikethi
Iinkqubo ezingama-20 zeKholeji ezikwi-Intanethi ezinamaKhonkco okuSebenzisa
Izikolo ezili-10 eziPhambili ze-Intanethi kwiNigeria
Iikhosi ze-Intanethi izifundo zekhompyutha funda kwi-intanethi
Iikhosi zeekhosi zasimahlaizifundo zekhompyutha
Post Previous:Izifundo zasimahla ze-18 ze-Intanethi zeFiziki ezineSatifikethi saBafundi
Okulandelayo Post:I-10 yeeDyunivesithi eziBalaseleyo eNew York zaBafundi beZizwe ngezizwe